﻿हरित गृह नर्सरी (poly greenhouse nursery) निर्माणका लागि आशयपत्र आह्व...
Apply before: 09 Aug, 2021
﻿हरित गृह नर्सरी (poly greenhouse nursery) निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको पुनः सूचना
Job posted on 02 Aug, 2021 Apply before 09 Aug, 2021
﻿﻿हरितगृह नर्सरी (Poly Greenhouse Nursery) निर्माणका लागि आशयपत्र आह्वान गरिएको पुनःसूचना
कोशी पीडित समाजको सक्षम परियोजना अन्तरगत सप्तरी जिल्लाको सप्तकोशी, कञ्चनरुप, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र तिलाठीकोईलाडी गाँउपालिकाहरुमा एक एक गरी चार वटा हरित नर्सरी गृह बनाउने योजना रहेको छ । बर्षभरी तरकारी र विभिन्न जातका फलफूलका गुणस्तरीय विरुवाहरु उत्पादन गर्नु हरित नर्सरी गृहको मूख्य उदेश्य हो । प्रस्तावित हरित गृह नर्सरीको विशिष्टीकृत आवश्यक्ताहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।
प्रस्तावित हरित गृह नर्सरीको साईज लम्बाई १५ मी., चौडाई ६ मी र उचाई ३ मी.हुनेछ र सोमा बैज्ञानिक आधारबाट डिजाईनगर्दा हुनसक्ने थोरै फरक स्वीकार्य हुनेछ ।
हरित गृह नर्सरीमा आवश्यक भेन्टिलेशन र चिश्यानाको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । यसकालागि स्पीङकलर सिस्टमको जडान हुनुपर्ने छ । साथै आवश्यक्ता अनुसार जालीको प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।
आशयपत्रका साथमा हरित गृह नर्सरीको विस्तृत डिजाइन, इस्टिमेट, प्रयोग गरिएने सामग्रीहरुको आयाम तथा विस्तृत इस्पेसिफिकेशन अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । डिजाइन, इस्टिमेट, आयाम तथा विस्तृत इस्पेसिफिकेशन विनाको आशयपत्रलाइ मान्यता दिइने छैन । गुणस्तरीय प्रमाणित सामग्री प्रयोगलाइ ग्राहयता दिइने छ ।
विगतमा हरितगृह नर्सरी निर्माण गरेका तथा अनुभव भएको आशयपत्रलाई ग्राहयता दिइनेछ । कार्य अनुभव पुष्टि गर्ने कागजात अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने छ ।
इआशयपत्रको साथ निम्नकागजातहरु अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
इच्छुक सेवाप्रदायकले उपरोक्त कागजातहरु सहित आशयपत्र सिलबन्द गरी vacancykvs@gmail.com मार्फत वा KVS राजविराज सप्तरीको कार्यालयमा ९ अगष्त २०२१ सम्ममा कार्यालय समयमा पठाउन सक्नु हुन्छ । थप जानकारीकालागि कार्यालयको सम्पक नं. ०३१५२२५२४, ९८४२८२७१२१ वा ९८५४०३८४५२ मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ ।
Apply Before 09 Aug, 2021
﻿सुचीदर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचन...
﻿Consultancy Services: Midterm...
Call for Consultancy for deliv...